Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 2)
Ny Twitter dia mamela anao hilalao horonantsary YouTube nefa tsy miala amin'ny fampiharana
Nahazo endrika roa vaovao ny fampiharana ofisialy Twitter: ny fahaizana mijery horonantsary YouTube nefa tsy miala amin'ny fampiharana ary mampakatra sary 4K.
Ny Beta voalohany an'ny Apex Legends Mobile dia manomboka amin'ity lohataona ity
Respawn dia nanamafy tamin'ny alàlan'ny bilaogy EA, fa ny kinova Apex Legends Mobile dia havoaka mandritra ity lohataona ity.
Apple dia mety manambara ny serivisy fisoratana anarana Podcast amin'ny hetsika Spring Loaded
Nandritra ny hetsika Apple Loaded Spring voalahatra ny 20 aprily, ireo an'ny Cupertino dia afaka nanolotra sehatra famandrihana podcast
Apple dia manavao ho azy ny fampiharana taloha miaraka amin'ny taratasy fanamarinana farany
Apple dia nanomboka nanavao ny taratasy fanamarinana ho an'ny fampiharana App Store taloha kokoa mba hiasa tsara amin'ny iOS 14.5.
Ny fampiharana Camo, hamadihana ny iPhone ho webcam, manampy asa matihanina
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hampiasana ny iPhone ho webcam, vao avy nanavao ilay rindrambaiko ho an'ny solosaina manampy fiasa mahaliana izy io
Spotify dia manohy mampiasa vola amin'ny podcasting miaraka amin'ny tabilao vaovao
Spotify dia nandefa tabilao podcast vaovao amin'ny fomba hita maso kokoa, manohy ny làlan'ny fampiasam-bola amin'ny podcasting.
Discord for iOS dia tsy mamela ny fidirana amin'ny vondron'olona lehibe
Ny rindrambaiko Discord ho an'ny iOS dia nanakana ny fidirana amin'ny vondron'olona olon-dehibe, sakana iray izay tsy misy amin'ny kinova Android.
Mpanara-dalàna alemanina iray no mitady hisoroka ny WhatsApp tsy hizara data amin'ny Facebook
Toko vaovao ao amin'ny Odyssey momba ny fiainana manokana Facebook sy WhatsApp. Mpanara-dalàna alemanina no manandrana misoroka ny fizarana data.
Malahelo ny daty ofisialin'ny hetsika Apple i Siri
Ilay mpanampy Siri dia saika nanambara tamim-pomba ofisialy ny datin'ny hetsika Apple amin'ity volana aprily ity
Tweetbot 6 dia havaozina miaraka amina mpilalao video vaovao
Tweetbot 6 dia mahazo lohahevitra famolavolana vaovao sy mpilalao horonantsary vaovao izay manohana ny endrika 'sary-amin'ny-sary' an'ny iOS 14.
iOS 13 no lasa kinova farany ambany amin'ny iOS hanohizana fanavaozana, miaraka amin'ny To Do sy Reddit no farany nanao izany.
Nikasa ny hamoaka ny lalao PlayStation amin'ny iPhone sy iPad i Sony. Te hizaha toetra ny tsenan'ny App Store toa ny efa nataon'i Nintendo izy.
Azonao atao ny manandramana ny interface interface an'ny Galaxy
Raha te-hitsapa Samsung ianao dia azonao atao mivantana avy amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny tranokala Samsung iTest
Manomboka tonga ao amin'ny iOS ny mpanampy virtoaly Spotify
Spotify dia nanomboka nanala eran'izao tontolo izao ny mpanampy iray ao anatin'ilay fampiharana mamela antsika hifandray amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo.
Nilaza i Tim Cook andro vitsivitsy lasa izay tamin'ny resadresaka nifanaovany fa misokatra hanova ny App Store izy na dia tsy manaiky izany aza satria hanimba ny maodelin'ny fiainany manokana
HomePaper, mandrafitra ny fiavianao manokana ho an'ny fampiharana Home
HomePaper dia rindrambaiko vaovao ahafahanao mamorona fiaviana mahafinaritra ho an'ny fampiharana Home amin'ny alàlan'ny sarinao manokana.
WhatsApp dia manandrana ny fifindran-toerana roa amin'ny tantaranao eo amin'ny iOS sy Android
WhatsApp dia mizaha toetra ny fifindra-monina indroa ny tantaranao eo amin'ny iOS sy Android. Ity no dingana voalohany hahitanao ny endrika maro an'isa an'ny WhatsApp.
Avy amin'ny mpamorona ny Final Fantasy, Fantasian dia tonga ao amin'ny Apple Arcade
Ny lalao Fantasian, avy amin'ilay mpamorona mitovy amin'ilay andian-tantara Fantasy Final, dia azo jerena manokana ao amin'ny Apple Arcade
Adobe dia manolotra fihenam-bidy 50% amin'ny fonosana fampiharana izay misy Photoshop
Adobe dia nanolotra tolotra isam-bolana izay misy rindrambaiko 5 hafa ho an'ny iPad amin'ny $ 14,99 isam-bolana ihany.
Miaraka amin'ny fanambaràna ny WWDC 2021, Apple dia nanavao ny fampiharana Apple Developer nanomana azy hampiditra ny atin'ny hetsika ity.
Nohavaozina ny rindranasa Spotlight Live mba hanampiana fanatsarana ny fandraketana an-tsary sy ny fanitsiana interface tsara.
Taratra majika no nahavoa ny App Store niaraka tamin'ny lalao 'The Gathering Arena'
Tonga any amin'ny App Store ny karatra majika noho ny lalao multiplatform 'The Gathering Arena' azo alaina amin'ny sisa amin'ireo rafitra fiasa.
Apple Maps dia manomboka mampiseho fampahalalana finday haingam-pandeha any amin'ny firenena vaovao
Apple Maps dia manohy manavao ny asany miaraka amin'ny hazakazaka hahazoana ny seza fiandohan'ny fitetezana. Amin'ity indray mitoraka ity dia manampy radara any amin'ny firenena maro.
Final Fantasy VIII Remastered dia misy ao amin'ny App Store
Ny remastering ny lalao Final Fantasy VIII dia azo alaina ao amin'ny App Store, amidy ho fampiroboroboana.
Tonga eo amin'ny App Store i Crash Bandicoot
Ny kilasin'ny console Sony, Crash Bandicoot dia tonga teo amin'ny App Store avy amin'ny tanan'ireo mpamorona ny Candy Crush
Tsy mandeha ny fizarana hitsin-dàlana amin'ny alàlan'ny iCloud
Ireo hitsin-dalana notehirizina tao amin'ny iCloud dia tsy nisy nandritra ny ora vitsivitsy nefa tsy nanamafy ny olana tamin'izy ireo i Apple.
Rocket League Sideswipe, nambara tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny iOS sy Android
Ny lalao Rocket League Sideswipe dia voamarina ary ny kinova alpha voalohany dia navoaka ho an'ireo mpampiasa Android. Tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny iOS izy io
Nintendo's Pikmin dia ho tonga amin'ny iOS ho toy ny lalao tena zava-misy
Niantic sy Nintendo dia nanambara ny fanombohana Pikmin ho an'ny fitaovana finday amin'ny lohateny izay mampiasa ny zava-misy mitombo
Apple manavao pejy, isa ary Keynote miaraka amina endrika vaovao
Ireo rindranasa izay ao anatin'ny iWork, Pejy, Nomery ary Keyonte, dia nahazo fanavaozana vaovao azo alaina ho an'ny iOS sy macOS.
Spotify manavao ny efijery an-trano miaraka amin'ny podcast, ny zavatra hita ary tantara mitantara
Spotify dia manavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fanovana ny efijery an-trano hanamorana ny fidirana amin'ny podcast sy ny tantara an-tsary.
Opera ho an'ny iOS dia manavao tanteraka ny endriny
Ny browser Opera dia nohavaozina mba hanolorana endrika malemy sy kely kokoa ary manampy asa vaovao.
Mijanona tsy miasa amin'ny iPhone 4S ny WhatsApp ary manafoana ny fanohanana ny iOS 9
Ny vaovao farany WhatsApp dia nitondra vaovao ratsy ho an'ny mpampiasa iPhone 4S. Nesorina ny fanohanana ireo fitaovana ireo.
Ny Instagram dia hanakana ny olon-dehibe tsy handefa hafatra amin'ireo tanora tsy manaraka azy ireo
Tian'i Instagram ireo mpampiasa zatovo hanao ny kaontiny manokana ary hanampy azy ireo amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo hafatra amin'ireo olon-dehibe tsy manaraka azy ireo.
Apple dia mamela an'i Russia hametraka mialoha ireo fampiharana amin'ny iPhones amidy ao an-trano
Apple dia nanome ny mialoha ny governemanta rosiana hametraka mialoha ny fametrahana ny rindranasa amin'ny iPhone sy iPad izay amidy ao amin'ny firenena
Afaka milalao ny Smash Legends vaovao any Espana ankehitriny ianao amin'ny fidirana aloha
Smash Legends dia azo alaina amin'ny fidirana aloha any Espana, multiplayer an-tserasera izay manana ny zavatra rehetra hahatongavany ...
Ny mpamorona ny emotika miaraka amin'ny volon-kodiny dia mitory an'i Apple
Apple dia notoriana noho ny fandikana ny hevitra momba ny famoronana emotikon miaraka amin'ny volon-koditra samihafa
Ny MagicBand an'i Disney dia hampidirina ao amin'ny Wallet amin'ny faran'ny taona
Ny fampiasa natolotry ny MagicBand ao amin'ny valan-javaboary fialamboly orinasa Disney dia ho azo alaina amin'ny alàlan'ny Wallet
Netflix te-hampitsahatra ny kaonty zaraina ary efa mandray andraikitra
Netflix dia nanomboka nandray andraikitra tamin'ny resaka kaonty zaraina eo amin'ny samy mpampiasa, ary mety ho faran'ity fanao ity.
Raha ny filazan'ireo tovolahy avy amin'ny Sensor Tower, ny habaka antonony nipetrahan'ny lalao tao amin'ny App Store dia nitombo 76% hatramin'ny 2016
Spotify dia manomboka ny fitsapana ireo lisitra tsy misy fetra ao amin'ny app CarPlay
Mpampiasa maro no mahita ny fahafaha-manao lisitra tsy manam-petra amin'ny alàlan'ny app Spotify ho an'ny CarPlay.
Tsy ela dia afaka nahazo ny fahaizana mandefa sary manimba tena ny WhatsApp
Ny betas WhatsApp farany dia milaza fa mety miasa amin'ny fandefasana asa miorina amin'ny sary manimba tena amin'ny iOS sy Android izy io.
Ny antso an-tsary sy horonan-tsary dia tonga ao amin'ny WhatsApp for Mac
Tsy mila mampiasa rindranasa hafa intsony, ny WhatsApp for Mac dia manana ny safidy hiantsoana sy hiantsoana video.
Fantasian, avy amin'ireo mpamorona ny Final Fantasy, dia ho avy tsy ho ela ao amin'ny Apple Arcade
Fantasian dia ho iray amin'ireo lohateny manaraka izay ho tonga amin'ny Apple Arcade, lalao iray avy amin'ireo mpamorona ny Final Fantasy ihany
Rehefa afaka telo volana tsy nisy vaovao dia manavao ny fampiharana Gmail ho an'ny iOS i Google
Nanavao ny fampiharana Gmail ho an'ny iOS ihany i Google amin'ny farany amin'ny fanatsarana ny fampiasana sy ny fampifanarahana ny politikan'ny fiainana manokana an'i Apple.
WidgetPod dia rindrambaiko vaovao ho an'ny iOS izay mametraka widgets playback ho an'ny Apple Music sy Spotify
WidgetPod dia rindrambaiko vaovao ho an'ny iOS izay mametraka widgets playback ho an'ny Apple Music sy Spotify, tsara lavitra noho ilay iOS teratany.
Instagram mandefa 'efitrano mivantana' miaraka amin'ny vahiny 3 velona
Instagram dia manandrana mandresy ny fitomboan'ny fangatahana ao amin'ny Clubhouse amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fampielezam-peo mivantana miaraka amin'ny 'Live Room' olona 4.
Nanambara ny lahasa "Super Follow" ny Twitter mba hidirana amin'ny mombamomba ny fandoavam-bola
Mahazo vahana matetika eo amin'ny sehatra sosialy ny fanomezana vola afa-tsy atiny manokana. Nahazo an'ity sombin-tsarimihetsika ity ny Twitter tamin'ny alàlan'ny "Super Follow".
Androany dia mamarana ny fampiroboroboana 3 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music HD
Androany 1 martsa 2021 no andro farany manararaotra ireo telo volana maimaim-poana omen'ny Amazon Music HD an'ireo mpampiasa Prime.
Telegram dia mandefa fanavaozana vaovao miaraka amina rohy fanasana lany daty sy maro hafa
Telegram kinova 7.5 dia ahitana vaovao momba ny rohy fanasana sy ny hafatra manimba tena indraindray.
WatchChat, ny fampiharana WhatsApp tsara indrindra ho an'ny Apple Watch [SWEEPSTAKES]
Notsapainay ny WatchChat, ny fampiharana tsara indrindra hankafizana ny WhatsApp amin'ny Apple Watch anao, ary namoaka fahazoan-dàlana dimy izahay.
Plex dia mizaha toetra ny fampidirana ny serivisiny amin'ny fampiharana Apple TV
Plex dia mikasa ny fahatongavany amin'ny rindrambaiko Apple TV miaraka amina kinova somary decaffeinin'ilay fampiharana manolotra atiny avy amin'ilay serivisy mihitsy.
Ny Genius Scan for iPhone dia havaozina amin'ny alàlan'ny AI of state-of-the-art
Fantatsika rehetra (na tokony hahafantatra) fa afaka manadihady antontan-taratasy amin'ny fakan-tsary amin'ny iPhone isika avy amin'ny ...
Star, avy any Disney +, misy any Espana izao
Ny sehatra Disney + olon-dehibe, Star, dia misy manerana an'i Eropa izao, ao anatin'izany i Espana
Ny fanenjehana ny Epic Games 'manenjika an'i Apple any Angletera dia tsy azo zahana
Ny fanenjehana an'i Epic amin'i Apple dia tsy azo enjehina noho ny toerana misy ny foiben'ny Apple
Tonga hatrany amin'ny Vondrona Eropeana ny fitarainana antitrust nataon'i Epic tamin'i Apple
Araka ny efa nampoizina, ny Epic Games dia nametraka fitoriana an'i Apple miampanga azy ho ampihimamba ao amin'ny Vondrona Eropeana.
Azo alaina amin'ny iPad izao ny kinova mihena an'ny Office for iPhone
Herintaona taorian'ny namoahana ny kinova iPhone dia namoaka ny Office for iPad i Microsoft, miaraka amin'ireo fiasa ireo ihany.
Canon dia mandefa rindrambaiko miaraka amina tsikombakomba artifisialy manaisotra ireo sary ratsy indrindra
Photo Culling dia fampiharana Canon izay mamela antsika, noho ny faharanitan-tsaina, hanadio ny rakikira iPhone
Epic Games dia nanomana ny fitoriana an'i Apple nandritra ny volana maro
Ny fitoriana napetraky ny Epic Games tamin'i Apple taorian'ny fanesorana ny Fortnite tao amin'ny App Store dia nomanina am-bolana maro.
Ny fampiasa PiP ao amin'ny YouTube dia ho tonga amin'ny mpizaha tany rehetra amin'ny iOS 14.5
Ny sary ao amin'ny sary dia niasa voalohany tamin'ny iOS niara-nitantana tamin'ny iPad, na izany aza, voatery nandany ...
Niala tsiny i Apple taorian'ny nisintomany fampiharana izay natao hitehirizana ny fiteny teratany
Ny fampiharana izay nesorin'i Apple tao amin'ny App Store izay mikendry ny hitehirizana fiteny vazimba ary nesorin'i Apple tao amin'ilay magazay, dia nanjary misy indray.
Mahazoa Apple Music volana 5 maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Shazam
Raha mbola tsy nanapa-kevitra ny hisoratra anarana amin'ny Apple Music ianao dia manolotra 5 volana maimaimpoana anay ry zalahy ao amin'ny Tim Cook.
Facebook dia nampiasa porofo "bogus" hitsikerana ny fepetra fanoherana ny fanarahan-dia ao amin'ny iOS 14
Facebook dia manohy manohitra ny rafitra fanoherana an'i Apple. Ny Harvard Business Review dia nanondro fa nampiasa data ratsy izy ireo tamin'ity fampielezan-kevitra ity.
Jereo ny hetsika ara-batana ataonao amin'ny widget miaraka amin'ny MyPedometerApp, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Widgets, izay nalaza be teo amin'ny Android hatrany, dia nankeo amin'ny iPhone tamin'ny famoahana ny iOS 14. Araka ny ...
Ahoana ny fomba fitehirizana angona finday amin'ny iPhone
Raha te-hihary angona finday amin'ny tahan'ny Internet ianao, eto dia asehonay anao ny tetika tsara indrindra hahazoana izany amin'ny iPhone.
Arovy ny teny miafinao amin'ny Microsoft Authenticator 'Autofill' vaovao
Inona no vaovao ao amin'ny Microsoft Authenticator, ny asany 'Autofill', ahafahanao miaro ny tenimiafinao mba hahafahanao miditra haingana amin'izy ireo avy eo.
Spotify dia mahatratra 155 tapitrisa ny mpanjifa mandoa vola
Spotify dia nampitombo ny isan'ny mpampiasa karama ary ny kinova maimaim-poana dia 345 tapitrisa.
Shazam dia mandefa widget vaovao ho an'ny efijery an-trano iOS 14
Ny fankalazana mozika an'i Shazam dia nampidirina tao amin'ny ekosistia iOS taorian'ny fividianana ny ...
iOS 14.5 manampy fanampiana ho an'ny mpanara-maso ny PlayStation 5 sy Xbox Series X / S vaovao
Ny iray amin'ireo zava-baovao atolotry ny iOS 14.5 dia hita ao amin'ny fanohanana ofisialy ny fifehezana ny PS5 sy ny Xbox Series X ary S.
Ny lalao Brawl Stars dia mihoatra ny $ 1.000 miliara amin'ny vola miditra
Ny anaram-boninahitra Supercell farany nahazoana $ 1.000 miliara dolara dia ny sehatry ny ady Brawl Stars
CARROT Weather dia mandefa ny kinova 5.0 misy vaovao mahaliana
Ny kinova vaovao 5.0 an'ny CARROT Weather dia mandefa endrika vaovao sy fampiasa vaovao izay ho tianao na mampiasa ilay fampiharana ianao na tsia.
Patent iray Spotify dia manolotra soso-kevitra amin'ny fanaraha-maso ny mpampiasa hanatsarana ny soso-kevitrao
Spotify dia nahazo fankatoavana patanty izay hanatsara ny rafitry ny tolo-keviny mifototra amin'ny data momba ny tontolon'ny mpampiasa.
Tweetbot 6 izao dia misy amina fiasa vaovao sy rafitra famandrihana
Tweetbot 6 dia misy ankehitriny miaraka amin'ireo fiasa vaovao Twitter API v2 sy rafitra famandrihana vaovao.
Fampiharana iPhone tsara indrindra hamerenana amin'ny laoniny ny findainao an-tserasera
Raha matetika ianao no mila mamerina mibaiko ny finday isan-karazany avy amin'ny mpandraharaha samihafa, dia ho liana ianao hahafantatra ireo rindranasa ireo.
Twitter dia mandefa ny hetsika "Birdwatch" hiadiana amin'ny vaovao diso
Nandefa hetsika vaovao ny Twitter mba hahafahan'ny mpampiasa mitatitra na mampifanaraka ireo sioka izay mampiseho fampahalalana diso.
Microsoft Lists for iPhone misy amin'ny App Store
Microsoft Lists dia misy ao amin'ny App Store. Amin'izao fotoana izao dia an'ny iPhone ihany. Hivoaka vetivety ihany koa ny kinova iPadOS.
Notorian'izy ireo i Apple noho ny tsy fanesorany ny Telegram tao amin'ny App Store noho ny antony nandrisihana herisetra
Ny fikambanana Coalition ho an'ny tranonkala azo antoka kokoa, dia nitory an'i Apple noho ny tsy fanesorany ny fangatahana Telegram tao amin'ny App Store
Epic dia mila Fortnite ho hita ao amin'ny UK App Store
Ny Epic Games indray dia nametraka fitoriana tamin'i Apple sy Google, tamin'ity indray mitoraka ity tany UK.
Ny app Parler dia mety hiverina any amin'ny App Store raha mahafeno ny fepetra amin'ny serivisy io
Tim Cook dia manamafy fa ny fampiharana Parler dia afaka miverina amin'ny App Store raha toa ka manadio ny atiny sy mametraka torolàlana vitsivitsy ho an'ny antonony.
Excel ho an'ny iPad izao dia mamela antsika hiasa amin'ny takelaka roa amin'ny efijery iray ihany
Na dia tara noho izay antenainao aza ianao, dia manolotra fanohanana feno amin'ny trackpad amin'ny Word ny Office, ny Excel dia manohana ny fizarazarana misaraka tanteraka, ary manampy fampivoarana ny PowerPoint.
Ity no ho endrik'ilay restyling an'ny Spotify ho an'ny CarPlay
Spotify dia efa mitsapa ny fampiharana vaovao hatolony ho an'ny mpampiasa CarPlay rehetra amin'ny fanavaozana ho avy.
TV Remote, fehezo ny TV amin'ny iPhone
TV Remote dia fampiharana tsara ahafahanao mampiasa ny iPhone ho lavitra ny fahitalavitra amin'ny fahitalavitra mifanentana maro.
TikTok no fampiharana nakarina indrindra tamin'ny Desambra 2020
TikTok no rindrambaiko nakarina indrindra tao amin'ny App Store tao anatin'ny 8 tamin'ny 12 volana 2020, izay namela azy hampitombo ny vola miditra.
Ny vokatra voalohany an'ny TikTok dia tonga mifanaraka amin'ny scanner LiDAR an'ny iPhone 12 Po
TikTok dia nandefa ny vokatra voalohany mifanaraka amin'ny scanner LiDAR an'ny iPhone 12 Pro, afaka mamakafaka ny halalin'ny tontolo iainana.
Ahoana ny fomba fampiasana sary toy ny fototry ny resaka WhatsApp
Ny fampidirana sary ambadiky ny resadresaka WhatsApp ataontsika dia dingana iray tena haingana sy mora amin'ny fanarahana ireo dingana ireo.
Fampiharana maimaim-poana tsara indrindra hamoahana ny iPhone sy iPad vaovao
Miankina amin'ny fomban-drazana ny fianakaviana, ny lehilahy lehibe manana fanomezana matetika dia tonga amin'ny andro krismasy na miaraka amin'ny ...
Tantano ary amboary amin'ny PhotInfo ny fampahalalana rehetra momba ny sarinao
Ny fahazoana, fanovana ary fampidirana ny fampahalalana EXIF ​​an'ny sarinay dia dingana iray tena haingana sy mora miaraka amin'ny application PhotInfo
Lockwise, safidy hafa tsy mitombina amin'ny 1Password, avy amin'ny Mozilla Foundation
Lockwise no mpitantana ny tenimiafin'ny Firefox, mpitantana maimaimpoana tanteraka izay eo ambanin'ny elo an'ny Mozilla Foundation.
Ny famoahana sary mihetsika ataon'ny AirTags dia manamafy ny famolavolana
Jon Prosser dia manivana ny sary mihetsika fampiroboroboana ny Apple AirTags manamafy ny endriny vita amin'ny boribory sy tamin'ny laser.
Aviary, fampiharana hafa hankafizanao ny fizotry ny Twitter
Aviary dia mpanjifa Twitter maoderina manana safidy marobe izay mampitombo ny fahafaha-mikaroka ny atin'ny tamba-jotra sosialy.
Nanafina fahagagana mifandraika amin'ny Apple Music i Shazam
Shazam dia nanisy fampiroboroboana Apple Music izay tianao tokoa. Fanomezana hanombohana ny taona 2021
Apple dia nanala lalao efa ho 100.000 tao amin'ny App Store China tao anatin'ny 6 volana lasa
Tao anatin'ny enim-bolana farany tamin'ny 2020, ny governemanta sinoa dia nanala ireo fampiharana maherin'ny 94.000 avy amin'ny Chinese App Store.
Ahoana ny fomba fampidinana sarintany avy amin'ny Google Maps hivezivezy tsy misy angona finday
Ny fampidinana ny Sarintany avy amin'ny Google Maps hivezivezy nefa tsy mampiasa ny taham-data, dia dingana iray tena tsotra izany amin'ny fanarahana ireo dingana izay tsipihinay amin'ity lahatsoratra ity.
Ny mpiasa ao amin'ny Facebook dia mitsikera ny hetsiky ny orinasa manohitra an'i Apple
Ireo mpiasan'ny Facebook dia tsy mijery tsara amin'ny fampielezan-kevitry ny orinasa manohitra an'i Apple
Ny GRID Autosport dia nihena ho 7,99 euro
Raiso izao ny lalao GRID Autosport miaraka amin'ny vidiny ambany noho izay hitantsika matetika ao amin'ny fivarotana iOS
Aza adino ny zava-nitranga manan-danja indrindra amin'ny alàlan'ny widget amin'ny efijery an-trano miaraka amin'ny Widget Studio
Miaraka amin'ny Widget Studio isika dia afaka mamorona widgets izay tsy mampiseho afa-tsy zava-dehibe amin'ny kalandrie misy antsika
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fanaraha-maso ny maso amin'ny iPad sy iPhone
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao manamboatra ny fifehezana ny DualShock na izay lavitra anananao amin'ny iPad-nao.
Epic Games dia mitohy amin'ny fampielezana azy Free Fortnite amin'ny alàlan'ny influencer
Rehefa toa najanona vetivety ny fampielezana ny Epic Games Free Fortnite dia niverina niady tamin'ny Eplu i Epic.
Ny valanaretina coronavirus dia nanao lalao finday tena tsara
Ny fanidiana nateraky ny coronavirus dia nahatonga ny lalao finday ho loharanom-bola lehibe indrindra.
Shazam dia manavao ny famolavolana ny fampiharana ary mandefa kinova an-tranonkala ho an'ny birao
Ny fampiharana Shazam vaovao dia mampiseho endrika vaovao nohavaozina izay mitovy amin'ny andalana ao amin'ny iOS 14. Ho fanampin'izany, misy tranokala vaovao hananganana ny serivisy.
Hamafisina ny tsaho: hanidy an'i Periscope ny Twitter amin'ny 2021
Periscope, serivisy Twitter ho an'ny fampielezam-peo mivantana, dia hanidy ny varavarany amin'ny volana martsa 2021.
Siri dia ho afaka hamoaka feo biby
Feo biby ao Siri rehefa asaina milalao azy ireo dia zava-baovao iray hafa hita ao amin'ny iOS
Manampy tabilao vaovao momba ny fiainana manokana ny App Store
Ny App Store dia nanampy takelaka fampahalalana vaovao ahafahantsika manamarina izay angon-drakitra apetrak'ireo rindranasa.
Ny fampiharana Djay Pro ho an'ny iPad dia manampy fanampiana amin'ny fifehezana fihetsika
Ny fampiharana djay Pro dia nohavaozina mba hanampiana rafitra fanaraha-maso fihetsika noho ny fahakingan-tsaina artifisialy
Ny fampiharana Apple Musical Pad dia handao ny App Store
Apple dia nanambara fa ny fampiharana Musical Bloc dia tsy ho hita ao amin'ny App Store intsony hatramin'ny 1 martsa 2021.
Azo alaina ao amin'ny Apple Arcade ny lalao vaovao avy amin'ireo mpamorona ny Monument Valley
Ny lohateny farany avy amin'ireo mpamorona Monument Valley, Dawn a Wildlife Adventure dia azo jerena ao amin'ny Apple Arcade.
Cydia, fivarotana app iOS tsy ofisialy, dia nitory an'i Apple ho an'ny ampihimamba iray
Ny fitoriana farany mifandraika amin'ny fiampangana antitrust an'i Apple dia avy amin'ny Cydia, fivarotana fampiharana azo alaina amin'ny jailbreak
Microsoft's xCloud dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny martsa 2021
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Microsoft rehefa ho tonga amin'ny fitaovan'ny iOS ilay sehatra lalao video streaming, xCloud.
Fehezo amin'ny alàlan'ny fampiharana Vekt ny lanjanao, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Misaotra ny fampiharana Vekt, afaka mifehy amin'ny fotoana rehetra ny lanja very (na mahazo) isan'andro isika ary mampiditra an'io fampahalalana io amin'ny fampiharana Fahasalamana
Miaraka amin'ny Noely dia miverina i TuLotero, ny fampiharana tsara indrindra hilalaovana ny loteria Krismasy
Ny fividianana tapakila ho an'ny kisarisary Krismasy avy amin'ny findainao no fomba haingana indrindra sy mora indrindra azo antoka noho ny fampiharana TuLotero. Manao ahoana
Waze dia manohana ny interface dashboard CarPlay
Waze dia nohavaozina mba hampifanaraka ny rafitra tontonana misy ao amin'ny CarPlay hatramin'ny namoahana ny iOS 13.4
Zombie Rollerz: Pinball Heroes no farany avy amin'ny Apple Arcade
Zombie Rollerz: Pinball Heroes no farany avy amin'ny Apple Arcade. Lalao famonoana zombie ampiarahina amin'ny pinball.
Spotify dia manatevin-daharana ny lamaody 'tantara' amin'ny fampiharana azy
Ny lamaody ny 'tantara' ao amin'ny Instagram dia tonga tany Spotify izay nanomboka ny tantarany manokana ao anaty playlist sasany.
Ny fihenan'ny komisiona Apple Store dia misy fiatraikany amin'ny 98% an'ny mpamorona
Ny fihenan'ny komisiona App Store ho 15% dia hisy fiantraikany amin'ny 98% an'ny Apple developer
Ahoana ny fomba hangatahana an'i Siri hamadika ny fanamafisam-peo amin'ny antso iray
Asehonay aminao ny tetika kely hampiasana ny mpandahateny ny iPhone rehefa manao antso amin'ny alàlan'ny Siri ianao
SaGa Frontier dia tonga amin'ny iOS remastered
SaGa Frontier dia ho tonga amin'ny iPhone sy iPad anao remastered tanteraka, fihodinana iray hafa amin'ny kilalao PlayStation amin'ity indray mitoraka ity.
Warp Drive no lalao farany nahavoa an'i Apple Arcade
Ny lalao farany miantsona amin'ny Apple Arcade dia Warp Drive, lalao fiara mihazakazaka izay teleport amin'ny hafainganam-pandeha.
Ny sary Google dia mitondra ny 'fahatsiarovanao' amin'ny efijery iOS 14 Home
Google Photos dia nandefa ny widget vaovao 'Your Memories' ho an'ny efijery finday misy ny iOS 14.
Google Docs dia mamela anao hanova ny antontan-taratasin'ny Office
Ireo rindranasa telo izay ao anatin'ny Google Docs dia efa mamela anay hanitsy ny antontan-taratasin'ny Office raha mitazona ny endrika.
LumaFusion dia mandefa ny kinova 2.4 misy vaovao tsara hanasongadinana
Ny kinova LumaFusion vaovao dia misy vaovao mahaliana sy manan-danja amin'ny fanovana horonantsary amin'ny fitaovana iOS.
Mikatona ho an'ny fialantsasatra ny App Store Connect amin'ny 23 ka hatramin'ny 27 Desambra
Ny App Store Connect, serivisy mitantana ny fampakaram-bola sy ny fanavaozana ny fampiharana dia mikatona mandritra ny fialantsasatra manomboka ny 23 ka hatramin'ny 27 desambra
Ahoana ny fomba hanajanonana ny Twitter Fleets
Na dia tsy azo atao aza ny mamono ny Twitter Fleets, ny fampitsaharana ny fahitana azy ireo azontsika atao dia ny fampanginana azy ireo.
Widgetsmith 2.0 mamerina mamorona ny tenany miaraka amin'ireo widgets prebuilt ho an'ny iOS 14
Widgetsmit dia nohavaozina amin'ny kinova 2.0 izay mamoaka ireo lohahevitra efa voalahatra ho an'ireo widget miaraka amin'ny fanavaozana ny Noely ho avy.
Ny Stadia an'i Google dia azo idirana amin'ny alàlan'ny Safari amin'ny herinandro ho avy
Google dia nanambara fa ny sehatry ny lalao streaming Stadia dia ho avy tsy ho ela amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny browser Safari.
GeForce IZAO dia misy amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny Safari ary mandritra izao tsy misy Fortnite
Ny serivisy fandefasana lalao NVIDIA GeForce IZAO dia azo alaina ao amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny Safari
Instagram dia manambara ireo fiasa vaovao mifandraika amin'ny Messenger
Ny drafitry ny Facebook hampifandray ireo sehatra rehetra ao aminy dia misy ny fandefasana ireo fampiasa mahazatra izay mamporisika azy Lazainay aminao.
Ny fanavaozana farany ny app Gmail ho an'ny iOS dia manome fanohanana ireo widgets izay avy amin'ny tanan'ny iOS 14
Twitter mandefa ny tantarany manokana amin'ny anarana hoe "Fleets"
Ny lamaody hampidirina tantara amin'ny sehatra sosialy dia nahatratra ny Twitter niaraka tamin'ny "Fleets". Lazainay aminao ny fomba fiasa sy ny mampiavaka azy.
Shazam mankalaza mpisera mavitrika 200 tapitrisa miaraka amin'ny mozika Top 100 ao aminy
Ny app Shazam, azon'i Apple tamin'ny 2017, dia nankalaza 200 tapitrisa mpampiasa mavitrika amin'ny fikarohana 100 Top.
MacPaw dia mandefa ClearVPN, sehatra vaovao-mora ampiasaina, sehatra hafa VPN
ClearVPN dia tambajotra tsy miankina virtoaly vaovao an'ny MacPaw, mora be ampiasaina ary misy fiasa mahaliana ary koa multiplatform.
Ny fizarana fahatelo an'ny Space Marshals dia azo alaina ao amin'ny App Store
Raha nankafizinao ny Space Marshals 1 sy 2, ny bandy ao amin'ny Pixelbite dia namoaka ny fizarana fahatelo, azo alaina maimaimpoana maimaim-poana
Castro Podcast Player dia mandefa ny widgets mifanaraka amin'ny maody maizimaizina ho an'ny iOS 14
Ny fampiharana hihainoana sy hitantanana ireo podcast tianao indrindra, Castro Podcast Player, dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fandefasana ireo widgets ho an'ny iOS 14.
Instagram dia miarahaba ny fizarana efijery vaovao an-trano
Instagram dia namoaka fanavaozana vaovao mamindra ny efijery an-tranony mandray ny tabilao Reels and Shop.
Ny fanavaozana farany ny TestFlight dia manampy fampidinana mandeha ho azy
Ny fanavaozana farany indrindra ny fampiharana TestFlight farany dia mamarana ny iray amin'ireo zava-bitan'ny fampiharana.
Heart Analyzer manampy vaovao oksizenina amin'ny Apple Watch anao
Ny fampiharana Helix Apps malaza dia manolotra fahasarotana vaovao ho an'ny Apple Watch miaraka amin'ny fanaraha-maso oksizenina amin'ny ra sy ny hafa.
Fortnite dia mamela anao handany ny V-Bucks novidina tao amin'ny App Store amin'ny sehatra hafa
Raha nividy V-Bucks tao Fortnite ianao talohan'ny nisintonana azy tao amin'ny App Store dia efa azonao atao ny mandany izany amin'ny sehatra hafa ankoatry ny iOS sy macOS.
Ny fampiharana YouTube dia manampy HDR amin'ny iPhone 12
Ny fampiharana YouTube ho an'ny iPhone 12 dia nohavaozina tamin'ny famahana ny olan'ny fifanarahana ary nanampy ny fanohanana HDR.
Ny fampiharana hankafizanao an'i Stadia amin'ny iPhone sy iPad dia niverina
Aorian'ny fanovana ny fanohanan'ny mpanara-maso ny Bluetooth, ny application Stadium dia niverina ho azo alaina ao amin'ny App Store.
Tsy hiasa intsony i Edomondo amin'ny 31 Desambra ary hanjavona ao amin'ny App Store
Under Amour, tompon'ny Edmondo, dia nanambara fa hijanona tsy hiasa intsony ny fangatahana iOS ary hahazo vaovao farany amin'ny 31 Desambra 2020
Ianareo sy ny Reings rehetra: Beyond no anaram-boninahitra roa vaovao tonga amin'ny Apple Arcade
Apple dia nanisy lohateny vaovao roa ho an'ny katalaogin'ny lalao efa be dia be hita ao amin'ny Apple Arcade, ny iray ho an'ny lalao ankamantatra ary ny iray hafa ho velona.
Fortnite dia hiverina amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny tanan'i Nvidia GeForce Now
Talohan'ny faran'ny taona, Fortnite dia afaka niverina tany amin'ny iOS noho ny serivisy lalao streaming an'i Nvidia's GeForce Now.
Afaka mampiasa Pandora mivantana avy amin'ny HomePods ianao izao
Ny serivisy fandefasana mozika Pandora, dia nanavao ny rindrambaiko mba hifanaraka amin'ny HomePod sy HomePod mini
Fampiharana Apple TV tonga amin'ny Xbox amin'ny 10 Novambra
Amin'ny herinandro ambony dia ho tonga ao amin'ny Xbox ihany koa ny fampiharana Apple TV, na amin'ny maodely ankehitriny na ho an'ny taranaka vaovao.
Call of Duty: Mobile dia mahatratra 300 tapitrisa ny fisintomana amin'ny tsingerintaona voalohany
Naharitra herintaona ny lalao Call of Duty: Mobile mba hisintomana 300 tapitrisa ary hahazo vola mitentina 500 tapitrisa dolara
Niakatra tampoka ny vidiny tany Etazonia i Netflix
Nanapa-kevitra ny hampiakatra ny famandrihana Standard sy Premium any Etazonia eo anelanelan'ny iray sy roa dolara i Netflix nefa tsy fantany raha hahatratra firenena hafa izy ireo
TikTok farany nandefa ireo widgets an'ny efijery iOS 14 an-trano
Tonga ihany ny widget 14 an'ny iOS XNUMX ho an'ny efijery TikTok, iray amin'ireo fampiharana ampiasaina indrindra amin'izao fotoana izao.
Hita any Italia izao ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka
Apple Maps dia nanomboka naneho fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any amin'ireo tanàn-dehibe any Italia
Misy ny PlayStation App vaovao vonona ho an'ny PS5
Misy ny PlayStation App vaovao vonona ho an'ny PS5. Misy telo herinandro alohan'ny fanombohan'ny PS5, efa nivoaka ny App vaovao.
Mankalaza ny fahatongavan'ny iPhone 12 ny Clips ary mamela anao handraikitra horonantsary amin'ny HDR
Apple dia nanavao ny fampiharana azy hanovana horonantsary fohy Clips miaraka amin'ny vaovaon'ny iPhone 12 sy vaovao maro hafa.
Ny direct of Instagram dia mety haharitra 4 ora ary tahirizina mandritra ny 30 andro
Instagram dia nandefa vaovao momba ny fitaovana malaza amin'ny fitarihana ny Instagram: hatramin'ny 4 ora ary ny fahafahan'ny fitahirizana azy ireo.
Apple dia hampiakatra ny vidin'ny App Store any Kolombia sy any amin'ny firenena hafa
Ny vidin'ny fampiharana, ny lalao ary ny fividianana rindrambaiko any amin'ny firenena sasany dia hiakatra amin'ny andro ho avy, ary mifanaraka amin'ny fanovana any amin'ny firenena tsirairay.
Havaozina Youtube nahazo fihetsika vaovao mahomby kokoa
Ny serivisy horonantsary streaming be mpampiasa indrindra eto amin'izao tontolo izao, Youtube, dia nanavao ny fampiharana ho an'ny iOS manampy vaovao tena mahaliana.
Apple COVID-19 dia nohavaozina miaraka amin'ny fanontaniana sy tolo-kevitra vaovao
Ny fampiharana Apple COVID-19 dia nohavaozina tao amin'ny App Store sy amin'ny tranokala ofisialy miaraka amin'ny tolo-kevitra sy fanontaniana vaovao momba ny soritr'aretina.
iMovie sy Garageband dia havaozina ary mahazo vaovao am-polony
Apple dia nanavao ny fampiharana ny suite iLife: Garageband sy iMovie izay misy vaovao mahaliana ho an'ny mpampiasa.
Launch Center Pro dia mamela anao hamolavola ireo sary masina tsy mila Shortcuts
Jereo ny fomba hanamboarana ireo sary masina eo amin'ny efijery an-tranonao amin'ny Launch Center Pro nefa tsy mila mamorona azy ireo amin'ny fampiharana Shortcuts
Apple dia manala ny TV Remote amin'ny App Store noho ny famerenana ny asany
Ny fampiharana TV Remote hifehy ny Apple TV dia nesorina tao amin'ny App Store by Apple satria ny asany dia efa tafiditra ao amin'ny iOS 14.
Ny fampiharana Xbox ho an'ny iOS izao dia mamela anao handefa lalao amin'ny iPhone sy iPad
Ny fampiharana Xbox vaovao izao dia mamela anao handefa lalao avy amin'ny console mankany amin'ny iPhone na iPad amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na amin'ny alàlan'ny fifandraisana data.
Nanova ny mailaka na ny rindranasa fanamoriana ve ianao? iOS 14.1 miverina amin'ny Mail sy Safari
Apple dia namoaka ny iOS 14.1 hanamboarana bibikely, fa toa manohy mamerina ny apps default Mail sy Browser foana.
Ny widget IOS 14 dia tonga tamin'ny fanavaozana Reeder 5 vaovao
Reeder 5 dia nohavaozina ary afaka mankafy widgets isika amin'ny efijery an-trano iOS 14 sy vaovao hafa tena mahaliana.
xCloud dia hahatratra ny iPhone sy ny iPad amin'ny alàlan'ny web browser
Nanapa-kevitra ny handeha amin'ny lalana mitovy amin'i Amazon miaraka amin'i Luna i Microsoft ary hanolotra fidirana amin'ny serivisy lalao video ao anaty rahona amin'ny alàlan'ny browser.
Azonao atao izao ny manova ny sary famantarana Instagram amin'ny fotoana faha-10 taonany
Amin'ny vanim-potoanan'ny tsingerintaona fahafolo an'ny Instagram, tadiavo ny fomba fanovana ny kisary amin'ny app ary miverina amin'ilay taloha miaraka amin'ireo maro hafa.
Spotify mampifangaro ny fikarohana tononkira ao anaty motera fikarohana
Spotify dia nandefa fiasa vaovao ahafahantsika mikaroka ireo hira tadiavintsika fatratra amin'ny sombin-tononkira ihany.
Azo alaina ihany ny maody maizin'ny fangatahana biraon'i Google
Telo taona taorian'ny nampidirana ny maody maizina tao amin'ny iOS, Google dia nanavao ny fampiharana ny birao mba hampifanaraka azy ireo.
Ny vola miditra amin'ny App Store nandritra ny telovolana farany dia nitombo 31%
Noho ny areti-mandringana ateraky ny coronavirus, ny fidiram-bolan'ny App Store dia nitombo tamin'ny 31% tamin'ny taon-dasa
Ny tranonkala Yotube dia mahazo indray ny asan'ny 'Picture in Picture' an'ny iOS 14
Ny tranonkala YouTube dia manohana indray ny fiasa Picture in Picture vaovao izay niaraka tamin'ny iOS 14 ary nofoanana ny YouTube andro vitsy lasa izay.
RSS mpamaky koa nanjavona tao amin'ny Chinese App Store
Taorian'izay, indray mandeha, ny fangatahana avy amin'ny governemanta sinoa dia nesorin'ny Apple ireo fangatahana RSS izay mbola misy ao amin'ny firenena.
Apple dia manome fitaovana ho fampiroboroboana ny fampiharana azy ireo
Manana fitaovana hampiroborobo ny fampiharana azy ireo izao ny mpamorona: Image QR, rohy fohy ary maro hafa.
Manomboka manandrana ny fanohanan'ny trackpad amin'ny fampiharana iPad azy i Microsoft
Microsoft manavao ny Word sy Excel betas-ny amin'ny alàlan'ny fampidirana totozy antoko fahatelo sy ny trackpad fanohanana amin'ny iPadOS.
Phoenix 2 dia mandefa ny iray amin'ireo lalao demo voalohany nataon'i App Clips
Ny bandy avy amin'ny Phonix 2 dia ampirisihina amin'ny famoahana ny lalao amin'ny kinova demo amin'ny alàlan'ny App Clips vaovao an'ny iOS 14.
Ny serivisy fandefasana horonan-tsarimihetsika Amazon dia tonga amin'ny iOS
Nanamafy i Amazon fa ny sehatra lalao video Luna, izay ho tonga amin'ny faran'ny taona, dia ho hita ao amin'ny iOS ankoatry ny fitaovana hafa
Fantastical dia manatevin-daharana ny hadilan'ny widget ho an'ny iOS sy iPadOS 14
Fantastical dia mandefa ny dikanteniny 3.2 mampiditra widget vaovao 12 ho an'ny iOS sy iPadOS 14 ary mampiditra ny fiasa Scribble amin'ny iPad.
Fomba fampiasana widgets iOS 14 miaraka amin'ny Widgetsmith
Fomba fampiasana widgets iOS 14 miaraka amin'ny Widgetsmith. Fampiharana tsotra hamoronana ireo widgets namboarinao.
Pejy, Isa ary Keynote no mahazo ny vaovao ho an'ny iOS sy iPadOS 14
Ny kinova vaovao 10.2 an'ny pejy, isa ary Keynote dia mahazo ny vaovao ary mampiditra ny fanatsarana ny iOS sy iPadOS 14.
Nilaza i Microsoft fa manolo-tena hatrany amin'ny fanomezana Game Pass amin'ny iOS
Na dia nasehony aza ny fisalasalany hanova ny politikan'ny App Store momba ny lalao streaming, dia manohy miloka amin'ny iOS i Microsoft
Azonao atao izao ny mametraka ny Spotify Widget, miaraka amin'ny TuneTrack
Haneho aminao ny fomba ahafahanao manana ny Spotify Widget amin'ny iPhone miaraka amin'ny iOS 14 amin'ny fomba tsotra sy haingana indrindra.
Nike Run Club dia nahazo fanavaozana tamin'ny alàlan'ny fampidirana endrika fiambenana modular vaovao, fomba alina ary andiam-panatanjahan-tena
Nike Run Club dia nohavaozina mba hitondra endrika fiambenana vaovao sy fiasa vaovao ho an'ny Apple Watch Nike Series 6.
Ny tranokala DuckDuckGo dia mamela azy io ho tonga mpitety toerana misy anao ao amin'ny iOS 14
DuckDuckGo dia nampifangaro ireo zava-baovao ao amin'ny iOS sy iPadOS 14 mamela azy io ho tonga mpitety toerana misy azy ao amin'ireo rafitra fiasa ireo.
Araka ny voalazan'i Apple, ny fitoriana ny lalao Epic dia fampandrenesana dokambarotra
Apple dia nilaza fa ny fitarainan'i Epic dia mifototra amin'ny doka goavambe mba hamerenana ireo mpampiasa very azy tamin'ny taona lasa.
Ahoana ny fomba hanamboarana an'i Google Chrome ho navigateur default anao amin'ny iOS
Aorian'ny fanavaozana farany azy dia afaka manao an'i Google Chrome ho mpizaha Internet mahazatra ao amin'ny iOS 14 isika izao.
Readdle Documents dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana serivisy VPN
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Documents dia misy serivisy VPN maimaim-poana voafetra 50MB isan'andro
Ary farany dia tsy hamono ny "Midira amin'i Apple" i Apple ao amin'ny kaonty Epic Games
Epic Games dia manamafy fa ny Apple dia tsy namono ny fisoratana anarana tamin'ny alàlan'ny "Midira miaraka amin'i Apple" amin'izao fotoana izao fa tsy matoky
"Company of Heroes" azo alaina amin'ny iPhone
"Company of Heroes" azo alaina amin'ny iPhone. Taorian'ny kinova ho an'ny iPad dia anjaran'ny iray mifanentana amin'ny iOS.
Azonao atao izao ny manomana ny dianao amin'ny tranokala ary mandefa azy ireo amin'ny app Waze
Ny rindrambaiko fitetezana Waze GPS dia nohavaozina manampy ny mety handaminana ny lalantsika teo aloha amin'ny tranokala.
Ny tsy fahitana amin'ny App Store dia mitentina $ 26 tapitrisa Epic isam-bolana
Ny vola isam-bolana amin'ny Epic Games noho ny tsy fahafahany manolotra Fortnite ho an'ireo mpampiasa iOS dia $ 26,7 tapitrisa
Nahatratra ny kinova 1.0 ny PUBG Mobile manavao an'i Erangel ary mamoaka ny interface
Ny kinova finday PUBG dia nahazo fanavaozam-baovao lehibe, anisan'izany ny fanovana an'i Erangel, ny fifandraisana amin'ny mpampiasa vaovao ary ny fanatsarana ny fahitana.
Ny Fitsarana Antitrust any Alemana dia miady hevitra amin'ny lalao Apple-Epic
Nanatevin-daharana ny antoko Apple sy Epic Games i Alemana noho ny adihevitra momba ny kaomisiona ao amin'ny micropayments Fortnite.
Ny Messenger dia mametra ny fandefasana hafatra amin'ny olona 5 toa ny WhatsApp
Ny fampiharana fandefasan-kafatra Facebook Messenger dia nanomboka nametra ny fandefasana hafatra ho an'ny olona 5, toy ny WhatsApp ihany
Epic Games dia mandefa fanambarana amin'ireo mpampiasa iOS manazava ny antony tsy ahafahan'izy ireo milalao Fortnite intsony
Ny savony Epic Games - Apple dia mafana noho ny hatramin'izay. Epic Games dia nandefa fanambarana manome ny kinovan'ny hetsika.
Seho horonan-tsary YouTube mitsingevana amin'ny fitsapana
Ny sary amin'ny asan'ny sary an'ny YouTube ho an'ny iOS dia mety ho tena zava-misy atsy ho atsy, satria io fizarana io dia ao anatin'ny dingan'ny fitsapana
Ny fanontana antontan-taratasy nozaraina amin'ny GoodNotes 5
Ny kinova GoodNotes 5 vaovao dia mitondra ny fahaizany manitsy antontan-taratasy misy eo amin'ny olona marobe amin'ny alàlan'ny URL nozaraina.
Tsy misy intsony ny lalao miampita Fortnite amin'ny iOS
Vokatry ny fifanolanana misy eo amin'ny Epic sy Apple dia ny tsy fahitana lalao afovoany mamela ny filalaovana sehatra hafa
Nanamafy i Epic fa tsy amin'ny iOS na macOS ny vanim-potoana vaovao Fortnite
Ny Epic dia mamarana ny fanantenan'ny maro fa ny vanim-potoana vaovao an'ny Fortnite dia ho hita amin'ny fitaovana Apple ihany.
Eve for HomeKit dia mandefa ny andiany 4.5 miaraka amin'ny menio 'My camera' vaovao
Eva kinova 4.5 ho an'ny Homekit dia mitondra fiasa vaovao manodidina ny fijerena miaraka ny fakan-tsary sy ny safidy hamadihana ny sary.
Sarintany UK sy Irlandy misimisy kokoa miaraka amin'ny fitsapana ny Apple Maps
Sarintany UK sy Irlandy misimisy kokoa miaraka amin'ny fitsapana ny Apple Maps. Tonga any Angletera ny fanatsarana ny sarintany US.
Taorian'ny nandreseny ny iPad "Company of Heroes" dia tonga tamin'ny iPhone ny 10 septambra
Taorian'ny nandreseny ny iPad, "Company of Heroes" dia tonga tamin'ny iPhone tamin'ny 10 septambra. Izy io dia ho kinova namboarina tamin'ny iPhone an'ny lalao malaza.
Ny fampahalalam-baovao mahazatra dia te-hifampiraharaha amin'ny komisiona 30% an'i Apple
Ny haino aman-jery amerikana lehibe dia nanao sonia taratasy mangataka amin'i Apple mba hampihenany ny saram-pandraharahana takian'izy ireo.
Epic dia mamorona ny amboara #FreeFortnite izay ny loka dia smartphone Android, konsole lalao sy solosaina finday
Epic Games dia namorona ny amboara FreeFortnite izay ahafahan'ny mpilalao tsara indrindra mandresy manomboka amin'ny solosaina finday ka hatrany amin'ny consoles ao anatin'izany ny smartphone Android
Google Maps dia manavao ny sari-taniny miaraka amina paleta miloko vaovao izay manome antsipiriany bebe kokoa ho anay
Google Maps dia manavao ny loko paleta izay anehoany ny sari-taniny hanomezana antsika vaovao bebe kokoa amin'ny faritra rehetra eto an-tany.
DoubleTake, ilay fampiharana mamela antsika hanoratra miaraka amina fakantsary maro miaraka, dia tonga amin'ny iPad Pro
Ny app FiLMiC Pro, DoubleTake, dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny iPad hahafahantsika mirakitra feo miaraka amina fakantsary roa miaraka-
Ny fampiharana hitsapana ny fampiharana beta TestFlight dia manavao ny sary famantarana azy
Ny TestFlight dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fandefasana sary famantarana vaovao nanao veloma ilay teo aloha izay niavaka tamin'ny faran'izay kely sy tsotra.
Manome Epic 14 andro i Apple hanarenana na hanafoanana ny kaonty mpamorona azy
Apple dia nanomboka nandray ny dingana voalohany hamerenana ny Lalao Epic hiverina amin'ny làlana tsara.
Ahoana ny fametrahana indray ny Fortnite amin'ny iPhone sy iPad
Raha efa nankafy Fortnite tamin'ny iPhone na iPad teo ianao, dia mbola afaka milalao indray amin'ny fanarahana ireo dingana amin'ny antsipiriany ato amin'ity lahatsoratra ity.
Telegram dia mandefa antso an-tsary miaraka amina encryption farany
Telegram mankalaza ny tsingerintaona fahafito amin'ny alàlan'ny fandefasana antso an-tsary miafina miafina sy emojiis vaovao.
Spotify lafiny amin'ny Epic Games
Araka ny efa nampoizina, Spotify, fahavalon'ny politika Apple, nanambara ny fanohanany ny hetsika nataon'ny Epic Games.
Fortnite dia nanjavona tao amin'ny App Store taorian'ny fampidirana rafitra fandoavam-bola izay mihoatra an'i Apple
Tamin'ny afovoan'ny tolakandro, ny fotoana Espaniôla, ny Epic Games dia nanampy andraikitra vaovao na amin'ny fampiharana Fortnite ho an'ny iOS na ho an'ny ...
Setapp Mac App Subscription Serivisy dia manitatra hatrany amin'ny iOS
Ny serivisy fisoratana anarana fampiharana Mac Setapp dia nanitatra ny serivisy ho an'ny iOS, mamela ny mpampiasa hamaha ireo fiasa premium an'ny kinova iOS.
Amazon dia miomana ny handefa sehatra podcast
Amazon dia nanomboka niresaka tamin'ny mpamatsy votoaty podcast lehibe hanombohana sehatra manokana ho azy.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Radar COVID, ny fampiharana fanarahan-dalàna amin'ny alàlan'ny fanarahana fifandraisana any Espana
Taorinan'ny fotoam-pitsarana novolavolaina tao amin'ny nosy La Gomera, ny fangatahana ofisialy ho an'ny lalan'ny fifandraisana ...
Ahoana ny fanesorana ny vakizoro Meet amin'ny app Gmail
Raha tsy mampiasa Google Meet ianao ary te-hialana amin'ny tabilao Gmail Meet, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanesoranao azy.
Azo alaina ao amin'ny iOS izao ny Facebook Gaming fa tsy afaka miditra amin'ny lalao
Amin'ny fanemorana 6 volana mahery, araka ny Facebook, ny fampiharana Facebook Gaming dia efa misy ao amin'ny App Store na dia tsy mahazo lalao aza
Diso Apple, ary mila manamboatra azy haingana
Ny vaovao vao haingana momba ny tsy famelan'ny Apple sehatra lalao video streaming dia miteraka resabe ...
Tsy avelan'ny Apple hankafy ny sehatry ny lalao mivantana ny mpampiasa iPhone sy iPad
Toa tsy misy toerana eo amin'ny tontolo iainana Apple ny serivisy fandefasana lalao, fanapahan-kevitr'i Solomôna izay hiova na ho ela na ho haingana.
Ahoana ny fomba hanampiana profil ao amin'ny App Amazon Prime Video
Ny famoronana profiles amin'ny Amazon Prime Video dia dingana iray tena tsotra izay mamela anao hanavaka ny atiny izay jeren'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana.
Ny Twitter izao dia mamela ny mpampiasa iOS rehetra hisafidy izay afaka mifanerasera amin'ny lahatsoratr'izy ireo
Ny fanavaozana farany ny app Twitter ho an'ny iOS dia ahafahan'ny mpampiasa rehetra misafidy izay afaka mamaly ny lahatsoratr'izy ireo.
Ny lalao PS4 sy PC Brawlhalla maimaim-poana dia misy ho an'ny iOS izao
Ny lohateny Brawlhalla, azo jerena amin'ny PC sy consoles, dia tonga teo amin'ny App Store ary mifanentana amin'ny lalao rehetra
Reels ity, valin'ny Instagram an'i TikTok
Ankehitriny Instagram (fananan'ny Facebook) dia nametraka ny TikTok teo amin'ny toerany ary nandefa ny Reels, manatrika ny fiandohan'ny faran'ny TikTok ve isika?
Phil Shiller dia nidina noho izy lehiben'ny tompon'andraikitra marketing
Phil Shiller dia feno 60 taona tamin'ity taona ity, ary araka ny voalazany, tonga ny fotoana hanamorana azy io ary hanana andraikitra vitsy kokoa ao amin'ny orinasa
Taorian'ny fianjeran'i Wirecard dia nikatona ny banky eropeana Boon ary nandao ny Apple Pay
Ny bandy avy any amin'ny neo-bank Boon dia manao veloma ary hanidy ny serivisin'izy ireo aorian'ny fikorontanana ara-bola momba ny tsy fandriam-bola mifandraika amin'i Wirecard rainy.
Apple dia nanala lalao sy fampiharana efa ho 30.000 tao amin'ny App Store noho ny tsy fanarahany ireo torolàlana avy amin'ny governemanta sinoa
Nanjary loharanom-bola lehibe ho an'i Apple i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy izay firenena manana 42 ...
Apple mividy fanombohana mamela anao hameno karatra tsy misy fifandraisana amin'ny findainao
Apple mividy fanombohana mamela ny karatra contactless ho voampanga amin'ny finday. Toy ny hoe misy terminal fandoavam-bola tsy misy fifandraisana, miaraka amin'ny finday avo lenta.
Ny fampiharana fanaraha-maso Radar Covid Espaniola azo alaina ao amin'ny Communities Autonomous
Ny fampiharana fanaraha-maso Radar Covid Espaniola azo alaina ao amin'ny Communities Autonomous. Miorina amin'ny Apple-Google API, efa miasa izy io ary ankehitriny ny Communities Autonomous dia tokony hampifanaraka azy amin'ny rafitry ny fahasalamany.
Telegram dia manameloka an'i Apple ho an'ny ampihimamba alohan'ny Vondrona Eropeana
Ny orinasa / fampiharana ultra miaraka amina mpampiasa an-jatony an-tapitrisany maro izay nanatevin-daharana ny fitoriana antitrust an'i Apple dia Telegram
WhatsApp dia hamela antsika hangina vondrona mandrakizay
Ireo vondrona miafina mandrakizay dia ho safidy iray izay ho hita ao amin'ny WhatsApp amin'ny fanavaozana ho avy.
Google dia handefa fampiharana hanao kopia backup ao amin'ny iOS
Google dia nanambara fa hanangana rindranasa vaovao hamerenana dika mitovy amin'ny iPhone ao amin'ny rahona Google.
Adobe dia manavao ny Photoshop ho an'ny iPad miaraka amin'ny maody fifantina vaovao miaraka amin'ny Edge Perfection
Adobe dia manavao ny fampiharana Photoshop ho an'ny iPad manatsara ny fisafidianana ireo zavatra ary mamela antsika hanodina ny lalantsika.
Nohavaozina ny telegram ary mamela antsika hametraka horonan-tsary ho profil ary hizara rakitra hatramin'ny 2 GB ary
Raha misy sehatra sasany, toy ny WhatsApp, efa tafapetraka amin'ny toerany manokana ary aza misahirana manampy ...